Ahoana ny fomba hanamarinanao ny paikadin'ny varotra horonantsary? | Martech Zone
Tsy ny porofo anecdotal fotsiny no manohana ny fampiasana horonantsary, fa ny siansa amin'ny horonantsary izay misarika ny saina sy ny fihetsem-pon'ny mpijery na ny mpamandrika. Izahay dia nanery ny mpanjifanay rehetra hifindra amin'ny horonan-tsary ary namafy azy ireo manerana ny tranonkalany… manomboka amin'ny horonantsary mpanazava ny vokatra, hatrany amin'ny sarimiaina sarotra, hatrany amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa ary amin'ny fomba mahazatra… ny video dia mitombo hatrany ny fampiroboroboana ny fifanakalozana tranokalan'ny mpanjifanay.
Tsy ny vidéo ihany no manome fitomboana 74% amin'ny fahalalan'ny mpitsidika ny vokatrao na serivisinao raha oharina amin'ny sary, fa izy ireo koa dia mampitombo ny fahafahan'ny mpitsidika mividy ny vokatrao na serivisinao amin'ny 64%.
izany infographic avy amin'ny Quicksprout mandehandeha amin'izay rehetra ilainao hanamarinana ny fampiasam-bolanao amin'ny horonan-tsary. Tsy fampiasam-bola 5 isa intsony ny horonan-tsary! Tsy fahita matetika ny fananana horonan-tsary matihanina novokarina tsara latsaky ny $ 10k - na dia misy aza ny feo sy ny sarimiaina.
Tags: fanamarinana ny vidinyLahatsary Marketingvoavidim-bolahoronan-tsary amin'ny mailakavideo marketingvaliny marketing video